Galaxy S10 Lite wuxuu lahaan lahaa batari awood leh oo dhan 4.370 Mah | Androidsis
Dhowr toddobaad ka hor warar xan ah oo ku saabsan imaatinka Galaxy S10 Lite suuqa ma imaanayaan. Samsung ayaa soo saari lahayd nooc cusub inta u dhexeysa, taas oo aan sidoo kale wax ka baranayno waqti ka dib. Marka waxaan ka heli karnaa fikrad ku saabsan taleefankan cusub astaanta Kuuriya. Hadda waxaa jira xog cusub.
Xaaladdan oo kale awoodda batteriga ee Galaxy S10 Lite ayaa la muujiyay. Wixii aan ka arki karno, taleefankan ka socda shirkadda Kuuriya wuxuu naga tagi doonaa ismaamul wanaagsan, taas oo shaki la'aan ka dhigi doonta ikhtiyaar xiiso weyn u leh isticmaaleyaal badan oo adduunka ah.
Sida ku cad xog cusub, batteriga taleefanka waxay lahaan lahayd awood dhan 4.370 mAh. Awood wanaagsan, oo lagu daro processor-ka uu Galaxy S10 Lite isticmaali doono, waa inuu na siiyaa madax-bannaanida wanaagsan marka la isticmaalayo qalabkan. Intaa waxaa dheer, waxay lahaan laheyd lacag degdeg ah oo ah 45W.
Waxaa jira warar xan badan oo ku saabsan imaatinka taleefankan cusub ee ka imanaya astaanta Kuuriya. Runtu waa taas ilaa iyo hada wax war ah lagama hayo ku saabsan sii deyntaan. Ma ogin goorta ay imaaneyso, runtiina Samsung ma xaqiijin jiritaankeeda.
Bilo ayaa laga joogaa tan iyo waxaa jiray xogtii ugu horreysay ee ku saabsan Galaxy S10 Lite. In kasta oo bishii Febraayo markii la soo bandhigayay kala duwanaanshaha taleefankaan aanu jirin. Hadda toddobaadyadan waxaa na soo gaaraya xogo cusub, kuwaas oo na siinaya tilmaamo ku saabsan qalabkan cusub ee shirkadda.
La soco Galaxy S10 Lite waxaa la qiyaasayaa in saxiixa wuxuu nooga tagi karaa Galaxy Note 10. Markaa waxay noqoneysaa soo bandhigista xiisaha shirkadda, oo dooneysa inay ballaadhiso heerkeedii ugu dambeeyay ee dhamaadka-sare. Hab lagu kordhiyo iibkaaga iyo inaad ku sii dhex jirto goobtan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Awoodda batteriga ee Galaxy S10 Lite ayaa la muujiyay